मोलुङ गाउँपालिकाका पर्यटकीय गहना [फोटो फिचर] | Hamro Okhaldhunga
मोलुङ गाउँपालिकाका पर्यटकीय गहना [फोटो फिचर]
प्रकाशित मिति: १६ माघ, २०७५
ओखलढुंगा– ओखलढुंगाको मोलुङ गाउँपालिका स्थानीय मोलुङ खोलाको नामबाट नामाकरण गरिएको गाउँपालिका हो । यो गाउँपालिकामा साविकका कुन्तादेवी, वरुणेश्वर, हर्कपुर, प्राप्चा, श्रीचौर तथा राँगादीपका पूरै भाग र पात्ले गाविसका १, २, ७ र ९ वडा मिलाइएको छ । यस गाउँपालिकाको पूर्वमा सिद्धिचरण नगरपालिका, पश्चिममा खिजीदेम्बा गाउँपालिका र चम्पादेवी गाउँपालिका, उत्तरमा सिद्धिचरण नगरपालिका र खिजीदेम्बा गाउँपालिका तथा दक्षिणमा सुनकोसी गाउँपालिका र सिद्धिचरण नगरपालिका रहेको छ ।
भूगोलका हिसाबले ११२ वर्ग किलोमिटर रहेको यस गाउँपालिकाको जनसंख्या १५ हजार ८ सय ६२ जना रहेको छ । ८ वटा वडामा विभाजित यस गाउँपालिका धर्म, संस्कृति, पर्यटन, राजनीति, उद्यमलगायतका क्षेत्रमा धनी मानिन्छ । तीमध्ये प्रमुख संभावना बोकेका क्षेत्रहरु यहाँ उल्लेख गरिएको छ ।
शिवदूतिका नामले समेत चिनिने मोलुङ खोला देम्बा डाँडालाई शीर बनाएर यो गाउँपालिकाको मध्य भाग हुँदै बहन्छ । यो खोला समग्र गाउँपालिकाकै समृद्धिको ढोकाको रुपमा चिनिन्छ । किनकि जिल्लाका अरु स्थानीय तहसँग यति ठूलो र चटक्क मिलेको खोला नै छैन । मोलुङ खोलाको पानी यहाँका खेतीयोग्य जमिन सिंचित गर्नका लागि किसानले प्रयोग गर्दै आइरहेका छन् । मोलुङ खोला समग्र गाउँपालिकाकै गहनाको रुपमा रहेको छ भन्दा फरक नपर्ला । यही खोलाको पानीले गाउँपालिकाका आधा दर्जन गाउँहरु झलमल भएका छन् । हालै ७ मेघावाटको मोलुङ हाइड्रो जलविद्युत् आयोजना सम्पन्न भएर सञ्चालनमा आएको छ । अन्य विद्युत् आयोजनाहरु अध्ययनको चरणमा छन् ।
साविकको रागादीप गाविसमा पर्ने सेप्ली झरना पर्यटकीय संभावना बोकेको झरना हो । सेप्ली खोलामा अग्लो पहराबाट झर्ने यो झरनासँग प्रकृतिप्रेमीहरुलाई लोभ्याउने कला छ । पर्यटकलक्षित संरचना तयार गर्ने हो भने ओखलढुंगा सदरमुकाम नजिक रहेको यो झरनामा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरुको भीड लाग्ने निश्चित छ । झरना क्षेत्रसम्म पुग्ने व्यवस्थित बाटो, झरना क्षेत्रमा संरचना निर्माण, खानपानको राम्रो व्यवस्था र प्रचारप्रसारलाई मात्रै ध्यान दिने हो भने पनि स्थानीयको जीविकोपार्जनको माध्यम र गाउँपालिकाको आम्दानीको स्रोत बन्न सक्छ । यहाँको सेप्ली र चिशंखुगढी गाउँपालिकाको रातमाटे झरनालाई लिखु गाउँपालिकामा रहेको पोकली झरनापछिको ओखलढुंगा जिल्लाभित्र भएका संभावित पर्यटकीय गन्तव्य रुपमा समेत चिनिन्छ ।
ओखलढुंगा जिल्लाका प्रमुख टारहरुमध्येको एक मानिने जरायोटार अन्नबाली उब्जनीमा समेत अब्बल मानिन्छ । मोलुङ र सोलुङ खोलाको बीचमा रहेको यो टारमा सिंचाइको राम्रो सुविधा छ । जरायोटारलाई धार्मिक, सांस्कृतिक एवं पर्यटकीय हिसाबले महत्वपूर्ण मानिँदै आएको छ । स्थानीयहरुले परापूर्वकालमा बाल्यावस्थामै मृत्यु भएका बेली र चमेली नामका दुई चेली देवीको अवतार लिएर जरायोटार सिंचित गर्नका लागि कुलो निर्माण गरेको विश्वास गर्छन् । स्थानीय सोलुङ खोला र घट्टेखोलाबाट जरायोटारसम्म बेली चमेली नामका दुईवटा कुलो अहिले पनि छन् । उक्त कुलो संभवत जिल्लाकै सबैभन्दा फराकिलो कुलो हो । आजभन्दा २० वर्ष अगाडिसम्म हलगोरु नारेर वारपार गर्न सकिने अवस्था रहेको स्थानीय पाण्डव खतिवडा बताउँछन् । अहिले भने दुवै कुलो जीर्ण हुँदै गएको उनको भनाई छ । जरायोटारमा २० एउटा गह्रो पर्यटकीय आकर्ष हुनसक्छ । यो लगभग एक बिघा फराकिलो छ ।
सोलुङ खोला, मोलुङ खोला र धोवी खोलाको संगमस्थलमा त्रिवेणीधाम छ । यहाँ जलजलेश्वर महादेवको चर्चित मन्दिर छ । यहाँ बाला चतुर्दशी, शिवरात्री र रामनवमीमा
भव्य मेला लाग्ने गर्छ । त्रिवेणी धाममै जिल्लाकै एकमात्र संस्कृत पाठशाला सञ्चालनमा रहेको छ । तीर्थयात्रा र संस्कृत अध्ययनका लागि पवित्र स्थान मानिन्छ ।
मोलुङ गाउँपालिकाको अर्को गहना भनेको वरुणेश्वर उमावि पनि हो । यो विद्यालय प्रदेश नं. १ कै सर्बोत्कृष्ट सामुदायिक विद्यालय हो । शिक्षा मन्त्रालयले शिक्षा दिवसको अवसरमा प्रदान गर्दै आएको उत्कृष्ट विद्यालय पुरस्कार पछिल्ला वर्षहरुमा प्रदेश नं. १ बाट यस विद्यालयले आफ्नो पोल्टामा पार्दै आएको छ । विद्यालयले तत्कालीन शिक्षा कार्यालयले चलाएको मिसन ७३ भिजन ७५ अभियान लागु गरेरपछि प्रगति हाँसिल गर्न सफल भएको हो । विद्यालयलाई हरेक वर्ष उत्कृष्ट बनाउनका लागि यहाँका शिक्षक, अभिभावक र विद्यार्थीको पसिना बहेको छ ।
वरुणेश्वरस्थित रामपुरमा रहेको शहीद पार्क प्रजातन्त्र प्राप्तिको संघर्षमा २०३१ सालमा मारिएका एकै गाउँका पाँच जनाको सम्झनामा स्थापना गरिएको हो । यो पार्कमा शहीदहरु लीलानाथ दाहाल, खगेनद्र दाहाल, ठगीराज दाहाल, गोकर्ण कार्की र पेशल दाहालको अर्धकदको प्रतिमा राखिएको छ । शहीद पार्कले नेपाली राजनीति र व्यवस्था परिवर्तनमा गाउँपालिका क्षेत्रको कति योगदान छ भन्ने कुरा झल्काउँछ ।
पुनर्निर्माणका प्राविधिक आन्दोलनमा
रक्षक सञ्जालमा शारदा
ओखलढुंगाका किसानहरु आलु खेतीमा आकर्सित
०९ चैत, २०७५
मुक्तिनाथ बैंकले गर्यो मोलुङ गाउँपालिकाका मृतकका परिवारको कर्जा मिनाहा
०१ चैत, २०७५
मुक्तिनाथ बैंकले ओखलढुंगाका ३ विद्यालयमा चलायो वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम
बेली चमेली खतिवडा समाजको अध्यक्षमा अर्जुन खतिवडा
१८ पुष, २०७५